Unyana wam okwishumi elivisayo utya kakhulu kwaye akatyebe | Oomama Namhlanje
Unyana wam okwishumi elivisayo utya kakhulu kwaye akatyebanga
UAlicia tomero | 08/06/2021 10:00 | ekufundeni, Phuhliso, Intsapho
Inqanaba lokufikisa liyahambelana nefuthe lentlalontle kunye nengqondo. Yiyo loo nto ukutyeba kakhulu kunokukhokelela ekubeni ugezelwe kwaye woyikiswe ngenxa yenkangeleko yakho. Kodwa kwenzeka ntoni xa Ngaba umntwana wakho ofikisayo utya kakhulu kwaye angatyebi?
Asinakuthetha ngengxaki yobunzima, Ewe, ngokuqinisekileyo asimboni umntwana ofikisayo, onobunzima obufanelekileyo kwaye enexhala ngendlela atya ngayo. Kuqhelekile ukubona amakhwenkwe engazinzanga ngenkangeleko yawo kwaye Yeka ukutya ukuze bangatyebeki, kodwa ayisiyiyo imeko yokuba sivavanye, ngokuchaseneyo.
1 Unyana wam okwishumi elivisayo utya kakhulu
2 Ukuba umntwana wam ofikisayo utya kakhulu, kutheni engatyebanga nje?
3 Ngaba umntwana wakho kufuneka atyebe?
Unyana wam okwishumi elivisayo utya kakhulu
Kukho abafikisayo abapasa inqanaba labo ngaphandle kokuyeka naluphi na uhlobo lokutya, ngendlala engalawulekiyo. Bachitha imini yonke besitya kwaye bechola kwaye befikelela nakwixesha lesidlo sangokuhlwa ukutya kwabo kuvula ngakumbi. Akuqhelekanga ukutywala kwisitya esihle sepasta kwaye ungeze ii-steaks ezimbini okanye ezintathu njengekhosi yesibini. Baye bakwazi nokuthatha iiyogathi ezimbini emva koko kwaye bazenze rhoqo.
Ngokwesiqhelo akukho nto yenzekayo kuba umntwana wakho utya kakhulu kwaye akatyebanga, okoko nje zondliwa zonke iintlobo zokutya kwaye ayisoloko ivelisa ngokubanzi kubo, ukuze ukutya kwabo kube nokungalingani xa bengatyi into elungileyo.
Ukuba umntwana wam ofikisayo utya kakhulu, kutheni engatyebanga nje?
Imfuza idlala indima enkulu kwimetabolism yabantu kwaye inyani kukuba iyathandeka. Yeyona apolipoprotein A5 yemfuza eneenjongo zokuhambisa amanqatha emzimbeni kunye nokukhusela abantu ekutyebeni kakhulu. Mhlawumbi umntwana wakho ungomnye wabo bantu baya kuhlala bebhityile ebomini bakhe kwaye kwinqanaba lakhe lokukhula kunye nokufikisa utya engayeki.
Esinye isizathu kukuba amakhwenkwe hayi amantombazana afikelwa lixesha lokufikisa emva kwexesha kwaye kuphuhliso lwabo baziva isidingo sokutya kuba bahlala benomdla wokutya. Ukufikisa emantombazaneni kuqala xa uneminyaka eli-12 ukuya kweli-14 kubafana. Eli xesha lihlala lithatha iminyaka emi-3 okanye emi-4 kwaye lilapha xa liqala khula ubude, uzuze ubunzima kunye nobunzima bemisipha.
Ulutsha oluninzi lugcina ukubukeka kwalo okumnandi ngokuzenza ngathi lutya ukutya okuninzi, lutya iintsuku ezintathu okanye ezine zilandelelana. Kodwa emva koko banokwenza inzala kukutya kwabo kokutya kangangeentsuku ezintathu ngokulandelelana kwaye ibuyisela inqanaba lakho leekhalori.
Imidlalo nayo yenza isifotho esikhulu xa ubona ukuba zikwisisindo esifanelekileyo. Ukuziqhelanisa nemidlalo kwenza ukuba umzimba ufune ukutya iikhalori ezininzi ukuze ugcine isingqisho. Ngendlela efanayo sinokubona ezininzi ulutsha olungenaloyikiso malunga nokuhamba imini yonke, ukuphuma kwiqela lemigulukudu kwaye ungayeki ukuhamba uyeke umsebenzi wabo. Kuya kufuneka bayikhulule iadrenaline yabo, bakhanyisa amandla kwaye baziva benomoya omkhulu wenkululeko.
Ngaba umntwana wakho kufuneka atyebe?
Umbono wokuzama ukutyeba uphikisana ngakumbi, kodwa unokukhathazeka xa ubona ukuba umntwana wakho itya kakhulu, ayityeba, kwaye ibhitye kakhulu. Ukufumana ubunzima kuthetha ukuzama ukufumana ezo khilogram ngenxa yokuba unobunzima obungaphantsi kwesiqhelo.
Inokuba yingxaki yezempilo kwaye ngenxa yoku kufuneka ibonwe ngugqirha okanye yingcali. Ubuncinci bakho bunokubangelwa ziintlungu zesisu okanye urhudo okanye ube nohlobo oluthile lwemeko oluguqulayo.
Ngaphambi kokuba uphakamise ialam, qiniseka ukuba umntwana wakho utya ngendlela eyiyoNgaphandle kokutya okona kutya, kufuneka utye isidlo sakusasa yonke imihla, ube nokutya okulula kwaye uhlala unesisindo sokutya okunesondlo kubandakanya iziqhamo, imifuno, kunye neenkozo ezipheleleyo.
Le mikhwa mihle ibalulekile ukuze ukukhula kwabo kuphilile kwaye kuqhelekile, Ngaphandle kokukhula ngokufunda imikhwa elungileyo esempilweni. Ukuba ekuhambeni kwexesha awuthobeli ezi datha, unokukhula kwikamva lakho utshintsho kwimetabolism yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Intsapho » Unyana wam okwishumi elivisayo utya kakhulu kwaye akatyebanga
Ukuhambelana kweqela legazi, ungayichaza njani kubantwana bakho?
Ukutya oku-5 okubangela imingxunya ebantwaneni